ढिलो बिहे गर्दै हुनुहुन्छ भने बिचार गर्नुहोस निसन्तानपन हुनसक्छ ? कति वर्षमा बिहे गर्दा सन्तान जन्माउन सजिलो हुन्छ ? – Complete Nepali News Portal
ढिलो बिहे गर्दै हुनुहुन्छ भने बिचार गर्नुहोस निसन्तानपन हुनसक्छ ? कति वर्षमा बिहे गर्दा सन्तान जन्माउन सजिलो हुन्छ ?
ScotNepal November 20, 2021
वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुती राेग विषेशज्ञ तथा निसन्तान विज्ञ डा. गिरधारी शर्मा बिगत लामो समय देखी निसन्तान दम्पतीहरुको लागी कसरी सन्तान प्रदान गरिन्छ भन्ने क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएकाे छ ।
साहारा फर्टिलिटी सेन्टर पाेखरा संचालन गरिरहनुभएका डा. शर्मासंग महिलाका समस्या र बाँझोपनको बारेमा धेरै अनुभव छ । बिशेषत बाँझोपन भएका वा भनौ सन्तान नभएकाहरुको उपचारमा उहाँ रातदिन खटिनुभएकाे छ ।
यौन र प्रजनन एक अर्कामा परिपुरक भएकाले कुनै पनि परिवार नियाजनको साधन प्रयोग नगरी एक बर्ष सम्म यदी कुनै दम्पतीको बच्चा हुँदैन भने त्यो बाँझोपन हुने उहाँको धारणा छ ।
बाँझोपन वा निसन्तानपन भयो भन्दैमा आत्तिन हुँदैन र यसको उपचार संभव भएको समेत उहाँकाे भनाइ रहेकाे छ । पछिल्लाे समय ढिलाे बिहे गर्ने प्रचलन बढेकाे भन्दै शर्माले यसले निसन्तानपन निम्त्याउने बताउनुभयाे । हेनुैहास् उहाँसंग गरिएको कुराकानी ।